Liquid Nitrogen Bhodhoro
Liquid Carbon Dioxide Bhodhoro
Vertical Kuchengeta Tangi
Horizontal Kuchengetedza Tangi
Dewar Bhodhoro Zvishongedzo
Pressure Rinodzora Valve
Mhangura Pipe Uye Chinongedzo Chekumanikidza Inodzora Valve
Nzira ina Dzakabatana
Liquid Level Ratidza
Liquid Chikamu Ratidza Chinongedzo
Yoyangarara Type Chikamu Gauge
Dhijitari Liquid Chikamu Meter
Inlet Uye Outlet Liquid Valve
Wemuchadenga Exhaust Valve
Rondedzero yeiyo cryogenic yekutengesa yemasirase gasi masirinda
Maumbirwo eDewar flask
Iyo yemukati tangi uye yekunze goko reDewar zvakagadzirwa nesimbi isina simbi, uye yemukati tangi rutsigiro system inogadzirwa nesimbi isina simbi yekuvandudza simba uye zvinobudirira kudzikisa kupisa kurasikirwa. Iko kune kudziya kwekuisa dura pakati petangi remukati uye yekunze goko. Multi-layer thermal kuputira zvinhu uye yakakwira vhoriyamu chengetedza iyo mvura yekuchengetera nguva.
Iyo yakavakirwa-mukati vaporizer yakarongedzwa mukati megobvu kushandura cryogenic mvura kuita gasi, uye iyo yakavakirwa-mukati muhombe inogona kuwedzera kumanikidza kune yakafanorongedzwa kumanikidza uye kuichengeta yakadzikama panguva yekushandisa, kuzadzisa chinangwa chekukurumidza uye kugadzikana kushandiswa. Imwe neimwe yakasungirirwa gasi humburumbira ine isina simbi mhete chimiro (dziviriro mhete) kuchengetedza pombi. Mhete yekudzivirira inosunganidzwa nesirinda ine mabhureki mana, uye bhureki rimwe nerimwe rakagadzirwa kuti riitise kushandiswa kwetirosi nemakireni kutakura humburumbira hwemweya.
Zvese zvinoshandiswa zvikamu zvinoiswa pamusoro peiyo humburumbira yegasi kuitira nyore kushanda. Munzvimbo yakazvimiririra yekushandisa, mushandisi anogona kunyatso kutonga mashandisiro kuburikidza nekuburitsa vharafu, booster vharafu, yekumanikidza geji, yemvura chikamu vharafu, nezvimwe.
Kuitira kuona kuti mukati memvura yegasi humburumbira iri pazasi pekumanikidza kwekuchengetedza, vharuvhu yekuchengetedza uye dhisiki rinoputika rakaiswa pane humburumbira yegasi.
Zvishandiso uye hunhu hweDewar flasks
Inoshandiswa kutakura nekuchengetedza zvinwiwa zve cryogenic zvakaita seyakisi okisijeni, emvura senitrogen, yemvura argon, yemvura kabhoni dhayokisaidhi, LNG, nezvimwewo Iyo gasi humburumbira inogona kushandiswa kugovera gasi remvura kana gasi.
Iyo gasi humburumbira iri nyore kushandisa, yakachengeteka uye yakavimbika, ine hupfumi uye yakasimba. Izvo zvakasarudzika maficha anotevera
1. Iyo yekutsigira sisitimu yemukati tangi yakagadzirwa nesimbi isina simbi kuzadzisa chinangwa chekudzikira kupisa kupisa uye simba rakakwira.
2. Zviri nyore kushandisa uye zvinogona kuvhiyiwa zvakasununguka nemunhu mumwe chete.
3. Chengeta yakachena cryogenic mvura. Yakakura yekuchengetedza chinzvimbo. Iyo gasi yekuchengetera kugona kweDP175 dewar cylinder yakaenzana neanopfuura ka18 nguva iyo gasi yekuchengetera kugona kweyakajairika-yekumanikidza gasi humburumbira.
4. Iko kumanikidza kwemukati kwegasi humburumbira kuchakwira panguva yekumisa chikamu mushure mekuzadza. Iyo gasi humburumbira ine yakakwira-kuita kuputira system, uye yayo yekumanikidza kuwedzera mwero yakaderera. Mumamiriro ezvinhu akajairwa, hapana chikonzero chekudzora kumanikidza kuburikidza nevhavha yekuchengetedza.
5. Iyo yakavakirwa-mukati supercharger uye vaporizer inogona kuona kuenderera kuenderera kwegesi kana mvura, uye hapana chikonzero chekuisa yekunze vaporizer pasi peyakagadzirirwa muyero.
Gasi subpackage indasitiri
Ongorora: Paunenge uchizadza gasi rechisikigo, shandisa mavhavha epamberi ekuchengetedza uye kubvisa disc rakaputika mutangi remukati.
Chenjedzo: Kugadzirisa iyo yepamusoro bhaudhi yeiyo yakasanganiswa kumanikidza inodzora vharuvhu hakuzovi nemhedzisiro yekumhanyisa iyo yekumanikidza kumhanyisa. Kugadzirisa iyo yepamusoro bhaudhi yemubatanidzwa wekumanikidza kudzora vharafu pakuda kuchaguma mukubatana kwekumanikidza mutemo. Ivhavha yacho yakanganisa.
Yakabatanidzwa kumanikidza inodzora vharuvhu: Iyi vharuvhu ine maviri mabasa ekumanikidza mutemo uye yekuchengetedza mhepo. Kana uchimanikidza, iyo cryogenic mvura iri mubhodhoro inoshandurwa ikave yakazara mafuta kuburikidza neiyo yekumanikidza coil, uye yobva yadzokera kune iyo gasi chikamu nzvimbo kumusoro kwesirinda kuburikidza neiyi vharafu, nokudaro ichipa kuenderera uye kwakadzikama kumanikidza mune humburumbira. Paunenge uchishandisa gasi, iyo gasi ine yakanyanya kumanikidza munzvimbo yegasi chikamu pamusoro peiri humburumbira inoendeswa kune yekunze kuburikidza nevhavha iyi kudzivirira kurasikirwa kwegasi kunokonzerwa nekuvhurika kwevhavha yekuchengetedza nekuda kweyakawandisa gasi kumanikidza. Izwi rezuva rinotenderera pasina mashandiro echinyorwa.
Gas kushandisa vharafu: Iyi vharuvhu yakabatana neyakavakirwa-mukati vaporizer, kuburikidza iyo vaporized gasi inogona kuwanikwa. Inoda chinongedzo cheCGA chinoenderana negesi inopihwa nemudziyo.
Inlet uye nzira yokubudisa vharafu: Iyi vharafu inoshandiswa kudzora kuzadza uye kuburitsa cryogenic mvura. Mushandisi anogona kubatana neiyo CGA pombi yakabatana pamberi pevhavha kuburikidza yakakosha hosipaipi, Ita kuzadza uye kuburitsa magasi masirinda.
Boosting vharafu: Iyi vharafu inodzora yakavakirwa-mukati booster redunhu. Vhura vharafu iyi kumanikidza bhodhoro.
Drain vharafu: Iyi vharuvhu yakabatana necase phase chikamu chegesi humburumbira. Kuvhura vharuvhu iyi kunogona kusunungura gasi iri musilinda uye kudzikisa kumanikidza.
Pressure geji: Inoratidza kumanikidzwa kweiyo girinda, iyo yuniti iri mapaundi pa square inch (psi) kana megapascals (MPa).
Chikamu cheji: Iyo cylinder level gauge ndeye inoyerera tsvimbo yechirimo mhando nhanho geji, iyo inoshandisa iyo buoyancy yeiyo cryogenic mvura kune ingangodaro inoratidza iyo cryogenic mvura iri muiri humbwende Kugona. Asi kuyerwa chaiko kunofanira kuyerwa.
Kuchengetedza mudziyo: Iyo cylinder liner yakagadzirirwa neyekutanga-chikamu chengetedzo vharuvhu uye yechipiri-chikamu chekuputika disc kuchengetedza humburumbira kana yakanyanyisa kudzvinyirira. . iyo sangweji rukoko rwatyoka uye pasi pemoto mamiriro. Kana iyovhavha yekuchengetedza ikakundikana, iyo inoputika disc ichavhura kuti isunungure kumanikidza kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwegasi humburumbira.
Ongorora: Paunenge uchizadza gasi rechisikigo, shandisa mavhavha epamberi ekuchengetedza uye kubvisa disc rakaputika mutangi remukati. Kudzivirirwa kweakavharidzirwa pasi pemamiriro ekudzvinyirira kunowanikwa nepombi yekuvhara. Kana iyo tangi yemukati ichidonha (zvichikonzera kuwedzeredza kwakanyanya kweanopindirana), iyo plug yekuvhara inozovhura kuti isunungure kumanikidza Kana pombi yepombi ichidonha, inotungamira mukuparadzwa kweiyo interlayer vacuum. Panguva ino, "kutuka" uye chando chegobvu chinogona kuwanikwa. Ehezve, chando kana kudzikama panoperera pombi yakabatana nemuviri bhodhoro zvakajairika.
Yambiro: Izvo zvakanyatsorambidzwa kudhonza iyo yekuvhara plug mune chero mamiriro.
Ongorora: Kubvaruka discs kunogona chete kushandiswa kamwe. Iyo disc rupture inofanira kutsiviwa mushure mekunge yaita. Inogona kutengwa kubva kune yedu kambani.
Pashure: Liquid Carbon Dioxide Bhodhoro
Zvadaro: Liquid Oxygen Cylinder
Liquid Nitrogen Mudziyo
Liquid Nitrogen Chinwiwa
Liquid Nitrogen Matangi
Diki Liquid Nitrogen Mudziyo
Adress: Kwete 1, Zhenggang Road, Matun Industrial Park, Raoyang County, Hengshui Guta, Hebei Province, China.